Inaliti ethe ngqo ethe ngqo kunye nokuphindisela ukuveliswa kwemigca yokutyibilikiswa kwabathengi ngokubalula ukusukela kuma-400mm-1600mm. Umgca wokuvelisa wokubuyisela awunakusetyenziselwa kungekuko ukuvelisa iindwangu ezityibilikayo kuphela, kodwa kunye nokwenziwa kwezixhobo zokucoca ulwelo nezixhobo zokucoca umoya. Izixhobo zokucoca ulwelo zisetyenziswa ubukhulu becala kwimihlaba yonyango lwamanzi, ipetroli kunye necandelo lemichiza, ngesakhiwo esifanayo, ukuchaneka kokucoca okugcweleyo, isiphumo esibonakalayo, kunye nobuninzi bokubamba ungcoliseko olunamandla kunye nobomi benkonzo ende. Izixhobo zokucoca umoya zisetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zokucocwa komoya, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho kucocwa umoya wangaphakathi, ukufotwa komoya weemoto, njl njl.
Lo matshini awunakwenza kuphela ukuveliswa kwezixhobo zokucoca ulwelo, kodwa kunye nezinto ezingalukwanga zinene kakhulu. Ngokutshintsha okude kokuhamba ngasemva nangaphambili, kunye nesantya, umgca wokuvelisa kwakhona onokwenza into engeyiyo eyolukayo ukuba ibe mnene. Emva koko, le nto ingasetyenziselwa ukwenza amalaphu afudumeleyo, ukwenza quilt kunye nokunye ukugcina abantu beshushu.
Ngokumangalisayo, kwiintsuku zamva nje, iinjineli zenkampani yethu ziceba ukwenza amanzi amkele ungqimba lweedapile zoMntwana. Kwaye bafumene impumelelo emangalisayo. Imveliso eyenziwa ngumgca wokubuyiswa kwemveliso eyenziweyo inokubambisa ngokulula amanzi. Ke ukusebenza komgca wokuvelisa kwakhona. Kwiintsuku ezizayo, iqela lobugcisa lenkampani yethu liya kuphuhlisa ngakumbi umsebenzi wentambo yokuvelisa kwakhona.
Ngaphandle kokunyibilikiswa kwendwangu yokuncibilikisa, umatshini wemaski yobuso ukwinkampani yethu yemveliso. Ngokwemfuno yomthengi, inkampani yethu inokubonelela ngohlobo olwahlukileyo lomatshini owenza imask.